၅ . ၁၀ . ၂၀၂၁ ကမ္ဘာ့ဆရာများနေ့မှာ မေးခွန်းတစ်ခု မေးလာတဲ့ ဆရာမလေး | BurmeseAsia
Home News ၅ . ၁၀ . ၂၀၂၁ ကမ္ဘာ့ဆရာများနေ့မှာ မေးခွန်းတစ်ခု မေးလာတဲ့ ဆရာမလေး
၅ . ၁၀ . ၂၀၂၁ ကမ္ဘာ့ဆရာများနေ့မှာ မေးခွန်းတစ်ခု မေးလာတဲ့ ဆရာမလေး
နွေဦးတော်လှန်ကြီးမှာ ပြည်သူတွေနဲ့ တစ်သားတည်းရပ်တည်ပြီး ရဲ့ရင့်စွာ ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ ဒီကျောင်းအုပ်ဆရာမလေးကို အားကလည်း လေးစားဂုဏ်ယူနေရသူပါ။
မကြာခဏဆိုသလို တော်လှန်ရေးကြီးအတွက် ပြည်သူတွေ ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့ စကားတွေနဲ့သူမရဲ့ ပုံလေးတွေအတူ ပူးတွဲဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။Tik Tok မှာဆိုရင်လည်း ဆရာမလေးက အရမ်းတော်လွန်းလို့ လူသိပိုများလာခဲ့သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ခုတစ်ခါမှာတော့ မြန်မာပြည်က ဆရာ ဆရာမတွေအားလုံးကို ခုလို မေးခွန်းထုတ်လာခဲ့ပါတယ်။5 10 2021ကမ္ဘာ့ ဆရာများနေ့မှာ မြန်မာပြည်က ပြည့်သူ့ ဆရာ မတွေရှင့်မြန်မာပြည်ကြီးနဲ့ မြန်မာ့ကျောင်းသားသူတွေအတွက် မြန်မာ့ဆရာကောင်း ဖြစ်ကြပြီလား ဆိုပြီးဆရာမလေးက သူမရဲ့ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ကျောင်းဝတ်စုံလေး ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ပုံလေးတွေနဲ့ အတူ လူမူကွန်ယက်ထက်မှာ ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
နွေဦးတော်လှန်ကြီးမှာ ပြည်သူတွေနဲ့ တစ်သားတည်းရပ်တည်ပြီးရဲ့ရင့်စွာ ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ ဒီကျောင်းအုပ်ဆရာမလေးကို အားကလည်း လေးစားဂုဏ်ယူနေရသူပါမကြာခဏဆိုသလို တော်လှန်ရေးကြီးအတွက် ပြည်သူတွေ ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့ စကားတွေနဲ့သူမရဲ့ ပုံလေးတွေအတူ ပူးတွဲဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။
Previous articleမြစ်ငယ် မီးရထား အရာရှိတဦး ပစ်သတ်ခံရ
Next articleမွေးနေ့လေးမှာ သူမရဲ့ခင်ပွန်းလောင်းကို ထုတ်ကြွားလာတဲ့ အဆိုတော် ဗီဗာဟိန်း